Horudhac: Manchester United vs Fulham…(Red Devils oo dib u heleysa laba xiddig oo dhaawac kaga maqnaa) – Gool FM
(Manchester) 18 Maajo 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa caawa ciyaari doonta kulankeeda ugu dambeeya ee garoonkeeda xilli ciyaareedka 2020-21 marka ay marti geliso kooxda Fulham.
Ciyaartan ka tirsan Premier League ayay Red Devils soo dhoweyneysaa naadiga lagu naaneyso The Cottagers xilli is araggii hore ee labadan naadi xilli ciyaareedkan ay Man United ku adkaatay 1-2 ciyaartii London lagu ciyaaray.
Si kastaba ha ahaatee, labadan naadi ayaa xaqiijiyay boosaska ay kaga dhammeysanayaan horyaalka Premier League maadaama ay kooxda Macallin Ole Gunnar Solskjaer ay ku dhammeysaneyso booska labaad halka Fulham ay ku dhammeysaneyso booska 18-aad iyadoo xaqiijisay u laabashada horyaalka heerka labaad.
Garsooraha: Lee Mason (England)
Manchester United ayaa caawa la filayaa inay dib usoo dhoweyso xiddigaheeda Daniel James iyo Anthony Martial kuwaasoo dhaawacyo kaga maqnaa kulammadii ugu dambeeyay, balse waxa aysan heli doonin kabtankeeda Harry Maguire oo ciyaartan ku seegaya dhaawac anqowga ah.
Dhanka kale, Fulham ayaa dib u heleysa xiddigeeda khadka dhexe ee Mario Lemina kaasoo seegay ciyaartii ay kooxdiisa la ciyaareysay naadiga iska leh mulkiyaddiisa ee Southampton.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa weli dhaawacyo kusii maqnaanaya xiddigaha kala ah Tom Cairney iyo Antonee Robinson.
Manchester United ayaa guuleysatay 18 ka mid ah 22-kii is arag ee ugu dambeeyay horyaalka Ingiriiska oo ay la ciyaartay Fulham iyadoo sidoo kalena guuldarro la’aan ah 12-kii ciyaarood ee lasoo dhaafay.
Kooxda London ka dhisan ayaa kaliya labo jeer ka badbaadday guuldarro 14 ciyaarood oo ay Premier League ku ciyaartay garoonka Old Trafford, waxayna gaartay guul 1-3 ah bishii October sanadkii 2003 halka barbarro 2-2 ah heshay bishii February ee sanadkii 2014.
Manchester United ayaa dooneysa inay iska ilaaliso saddex guuldarro oo xiriir ah inay kusoo gaaraan garoonkeeda iyadoo ciyaareysa horyaalka Ingiriiska, waxaana ugu dambeysay in saddex jeer oo xiriir ah lagu garaaco Old Trafford sanadkii 1979.
Red Devils ayaa xilli ciyaareedkan 2020-21 garoonkeeda loogaga dhaliyay 27 gool oo horyaalka Premier League ah, waana goolashii ugu dabdnaa ee hal xilli ciyaareed looga dhaliyo horyaalka iyadoo ku ciyaareysa garoonkeeda tan iyo fasalkii 1962-63.
Keliya hal jeer ayaa la garaacay Man United ciyaarteeda ugu dambeysa horyaalka ee ay gurigeeda ku ciyaareyso 13-kii xilli ciyaareed ee lasoo dhaafay, waxaana markaas garaacay naadiga xaqiijisay inay heerka labaad u laabatay ee Cardiff City sanad ciyaareedkii 2018-19.
Kulammada Manchester United ay Premier League ciyaartay xilli ciyaareedkan ayaa la isaga dhaliyay 112 gool, waana kooxda goolasha ugu badan laga dhaliyo ciyaaraheeda, halka Fulham fasalkan kulammadeeda horyaalka la isaga dhaliyay 76 gool.
Fulham ayaa heshay kaliya hal dhibic siddeeddii kulan ee lasoo dhaafay horyaalka.
Fulham ayaa dhanka kale guul la’aan ah 16-kii ciyaarood ee lasoo dhaafay oo ay horyaalka ku wajahday kooxaha ku jira labada boos ee ugu sarreeya maalintaas iyadoo la garaacay 14 ka mid ah halka labada kalena ay barbarro heshay, waxaana guul ay ka gaarto koox ku jirta labada boos ee ugu sarreeya horyaalka ugu dambeysay Manchester United oo ay 3-0 dhegaha uga dhufatay ciyaar ka dhacday garoonkeeda Craven Cottage bishii December ee sanadkii 2009.
Sidoo kale marka ay bannaanka kusoo ciyaareyso kooxaha aan kor kusoo xusnay, waxay guul gaartay kaliya hal kulan 21 kulan oo ay Premier League booqatay kooxaha labada boos ee ugu sarreeya kaga jira horyaalka, markaasna ay waxay 1-3 ku garaacday isla Man United bishii October ee sanadkii 2003.
Fulham ayaa noqon karta kooxdii ugu horreysay ee hal xilli ciyaareed Premier League kusoo garaacdo garoommadooda kooxaha Liverpool iyo Manchester United haddana u laabata heerka labaad.
Horudhac: Chelsea vs Leicester City...(Aar-gudashada ay maanka ku heyso Blues, hardanka booska UCL & koox kale oo faa'ido u aragta natiijada ciyaartan)